ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ.သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုကြပါစို. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ.သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုကြပါစို.
ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ.သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုကြပါစို.
Posted by ရွှေဘိုသား on Jul 18, 2011 in History |9comments
မြန်မာပြည်သူအပေါင်းနဲ.ကျွန်တော်တို. MG ရွာသားအပေါင်းတို. ကိုနှိုးဆော်ပါတယ်
ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဂုဏ်ပြုတဲ.သီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို
သိတဲ.အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကွန်နက်ရှင်က မကောင်းတာနဲ. သီချင်းတွေကို
တင်ချင်သလောက်တင်လို.မရဘူးဖြစ်နေတယ် အဲလိုဖြစ်တာနဲ.ကို ဗိုလ်ချုပ်ကို ပိုပြီး တောင်းတလာတယ်
နှမြောလာတယ် ငါတို.ဗိုလ်ချုပ်သာရှိရင် အခုလို ကွန်နက်ရှင်လည်း လေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်
ကျွန်တော်လည်း ဒီမိုဝေယံဆိုဒ်ကနေ ကူးယူထားတာပါ
ရွာသားတွေကို မျှဝေချင်တာနဲ. တင်ပေးလိုက်တာပါ
ရွာသားတွေတော. မသိဘူး ကျွန်တော်ကတော. ဒီဂုဏ်ပြုသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ရင် မျက်ရည်ကျတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်လို အလုပ်ကခွင်.မရလို. အာဇာနည်ကုန်းသွားပြီး ဂုဏ်မပြုနိုင်တဲ.သူတွေအတွက်
သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင် ဂုဏ်ပြုလိုက်ကြပါစို.ဗျာ
ဖိုးသူတော်လဲတော့ တောင်ဝှေးမကူနိုင်(၁) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
တလက်စတည်းပဲ ဒေါက်တာလှိုင်မြင်.ရဲ.ဆောင်းပါးလေးကိုပါ တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်က ကျားကန်ပေးနေတယ်လို့ ပြောတာထက် ဂုတ်ကိုစွဲပြီး ထောင်ထားပေးတယ် ပြောရရင် ပိုဆီလျှော်ပါမယ်။ တရုတ်ပြည်ကြီးဟာ ဦးနေ၀င်း လက်ထက်တုန်းက ကျတော့ အတိုက်အခံမရှိတော့ ဦးနေ၀င်းကို တိုက်တယ်။ ပီကင်းရေဒီယိုကနေ ကျနော်တို့လို ဦးနေ၀င်းအစိုးရကို လက်မခံနိုင်တဲ့ သူတွေတောင် ကြာတော့နားကြား မြင်းကပ်လောက်အောင် အရူးမ အသံနဲ့ နေ၀င်း-စန်းယု စစ်အစိုးရနဲ့ တအားအော်နေတော့တာပါဘဲ။ ဗ.က.ပ. ကို ငွေအား လက်နက်အား လူအားနဲ့ကူခဲ့တယ်။ ၁၉၇၃- လောက်ကစတင်ပြီး ပီကင်းရေဒီယိုကနေ တရုတ်တပ်မတော်က ဒီဝီဇံ တပ်မကြီးတခု ဥက္ကဌကြီးမော်ရဲ့ အမိန့်ကို ဖီဆန်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတခုထဲ ထွက်သွားတယ် ဗြောင်ကြေငြာပြိး ဗ.က.ပ တွေဘက်က လူအားနဲ့ ၀င်တိုက်ပေးတယ်။ ရှမ်းပြည်ဘက်မှာ တိုက်ပွဲကြီးတွေ ဖြစ်ရတယ်။ မြန်မာတပ်တွေဆို တပ်ရင်းလိုက် ဗ.က.ပ. အမည်ခံ တရုတ်တပ်တွေ လက်ထဲကျရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၈၈၈၈-လုံး ဒီမိုကရေစီရေစီးကြောင်းကြီး ပေါ်လာတာနဲ့ ကမန်းကတန်း ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်တွေ တက်သုတ်ရိုက် သဘောတူလိုက်ပြီး စစ်တပ်ကို ကျားကန်ပေးတော့တယ်။ မ.ဆ.လ. ပါတီ အရေးပေါ်ညီလာခံ ခေါ်ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်း နုတ်ထွက်နေချိန်မှာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်လုပ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ရေစီးကြောင်းကြီး မပေါ်လာအောင် အပြတ်လုပ်ဆောင် ပါတော့တယ်။ တရုတ်က သူ့အိမ်ဘေးကပ်လျှက် မြန်မာမှာ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားလာမှာ ပူပင်တာ အချက်အများကြီးပါ…..။
(၁) အဓိကနဲ့အရေးကြီးဆုံးပါ။ သူ့နိုင်ငံနဲ့ နယ်နမိတ် အများဆုံး ထိစပ်နေတာက မြန်မာက (မွန်ဂိုးလီးယား နဲ့ရုရှား မှအပ) အများဆုံးလဲဖြစ်။ တခါ မြန်မာက ပညာတတ်သူပေါများတယ် ။ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားလာရင် ချက်ချင်းထောင် တက်လာမယ်ဆိုတာ သိနေတယ်။ အဓိကက သူ့ဆီကို ဒီမိုကရေစီ ရေစီးကြောင်း ကူးလာမှာ အကြောက်ဆုံး။ သူ့နားကပ်လျှက် ဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှ မရှိစေချင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်မှာက တရုတ်တွေအများကြီး ရှိနေတော့ မြန်မာပြည်မှာသာ ဒီမိုကရေစီရရင် သူ့တရုတ်တွေ ဆီကို ဒီမိုကရေစီ အမြန်ဆုံး ပြန်သွားနိုင်တယ်လေ။
(၂) မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရလာရင် စီးပွားရေးအရ ပြိုင်ရမဲ့ စီးပွားပြိုင်ဘက် တခုတိုးလာမှာလည်း ပူတယ်။ သူတို့ဆီက စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပို့ရမယ့် နိုင်ငံ ညံ့ညံ့ တခုပျောက်သွားမှာလဲ ပူတယ်။ စီးပွားချင်းပြိုင်ရမယ် ပြီးးပစ္စည်းအစုတ်တွေ ညာရောင်းလို့ ရမယ့် ဈေးကွက် တခုပျောက်ပျောက်သွားမယ်။
(၃) သန်းရွှေလို အတော်လေး ညံ့တဲ့ အာဏာရှင်ရှိထားရင် အဲဒီအာဏာရှင်ဟာ သူရပ်တည်ရေးအတွက် တရုတ်ကို အားကိုးရမယ်။ အားကိုးမှု တောင်းလာတိုင်း အခုလို ဗွီတိုအာဏာ သုံးပေးနေရမယ်။ တနည်း ဗွီတိုအာဏာကို သန်းရွှေက အလားကားရတာ မဟုတ်ဘူး။ လျှို့ဝှက်ပြိး အပေးအယူနဲ့ ဗွီတို ကို ထုတ်သုံးပေးထားတာ။ ကိုးကိုးကျွန်းမှာ ရေဒါထိုင်ဖို့။ အခု ဓါတ်ငွေ့ကို ရောင်းပေးတယ်။ အခုဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးအတွက် တရုတ်တပ်တွေ ၀င်ခွင့်ပေးထားတယ်။ တနည်းပြောရရင် သူတို့ရဲ့ဗွီတိုကို ပင်တိုင်ဝယ်နေမယ့် ဖေါက်သယ်ကြီး ရထားတာပါဘဲ။
အခုဆို သန်းရွှေမြေးကို မြန်မာပြည် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးခန့် ပေးမယ်ဆိုပြီး မြန်မာပြည်ကို တရုတ်-ဗမာ အဓိကရုံး ဖေါ်လိုက်ပြီး တရုတ်စစ်တပ်တွေဝင်လာအောင် လျှို့ဝှက်သဘောတူထားတာလဲ လုပ်ထားနိုင်တယ်။ သန်းရွှေဟာ သူ့မြေးကို ဘုရင်လို တင်မြှောက်ချင်နေတာလေ။ သိချင်ရင် ပထမ ကမ္ဘာစစ်မတိုင်မှီ တရုတ်ဗိုလ်ချုပ် ယွမ်ချီကိုင်နဲ့ ကျူးကျော် ဂျပန်စစ်တပ်နဲ့ တရုတ်ပြည်သူတွေ မသိအောင် လျှို့ဝှက်ချုပ်ဆိုထားတာ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ အဲဒီလိုပုံစံ လုပ်မထားဘူးလို့ ဘယ်သူ အာမခံရဲမှာလဲ။ အတ္တစိတ်ကြီးမားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ယွန်ချီကိုင်လဲ ဒီလိုပုံစံချိုးခဲ့တာပါဘဲ ။
(၄) မြန်မာနိုင်ငံက ရေကြောင်းထွက်ပေါက်ကို ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတက်လာရင် သဘောတူညီချက် ရဖို့ဆိုတာ အလွန်ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းသွားမယ်။ ရရင်တောင် အခုလိုလည်း အပေါ်စီးရနိုင်မှာမဟုတ်တာကလဲ အဓိက ကျနေပါတယ် ။ အခုဟာကတော့ ဒူးမထောက်ရရုံတမယ် ဘ၀ရောက်နေတာလေ။
(၅) မြန်မာတွေ စီးပွားအင်အားတောင့်လာရင် သူ့တရုတ်လူမျိုးတွေ လာရောက်ရင်းနှီးဖို့ အခွင့်အလမ်းမရနိုင်ဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေ ၀င်လာမှာလဲ ပူပန်တယ်။ အခုတော့ မြန်မာမြေမှာ သူတို့တရုတ်တွေက နံမည်အတုတွေနဲ့ ၀င်ငွေပြစရာမလိုဆိုပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေကို အထူးလုပ်ခွင့် ဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ဟိုကလဲ အမြင်ကနည်းနည်းလေ။ အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ရင် ၀င်ငွေမပြနိုင်သူ အခွန်၁၂-% ဆောင်ရင် မစစ်ဆေးတော့ဘူး ဆိုပြီးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ မြန်မာမြေတွေ ပြည်ပလူမျိုးခြားလက်ထဲ လက်တလုံးခြား ထိုးရောင်းတဲ့နည်းဘဲ။
(၆) မြန်မာတွေ ဒိမိုကရေစီ ရရင် မြန်မာပြည်ကတရုတ်တွေက ထိုင်ဝမ်ကို အဓိက အားထားဆက်သွယ်လာမယ် ။ မြန်မာပြည်မှာတိုင်ဝမ်တွေ မတရားရင်းနှီးလာမယ်။ ထိုင်ဝမ်ကလဲ မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ရမယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ ဘီလျှံချီသုံးဖို့အဆင်သင့်။ ကျနော်တို့ အတိုက်အခံတွေကို မယုံစားလို့ သူတို့အလုပ်ပြတ်နေတာ။ မြန်မာဒိမိုကရေစီ ရရင် တရုတ်ကြီး.. ထိုင်ဝမ် အရေးပူရတော့မယ်။
အခုဗိုလ်ရွှေလို လူညံ့ရထားတော့ စီးပွားရေးလုပ်တာက လုပ်တိုင်းကွဲနေတော့ ငွေပြတ်လာတယ်။ ငွေလိုလာတော့ အခွန်ငွေရဖို့ငွေမဲတွေကို ငွေဖြူခ၀ါချပေးတာ လုပ်ပြီးရင်းလုပ်နေရတော့တယ်။
ဘာဖြစ်လာမလဲ။ တရုတ်တွေက ပြည်တွင်းရှိ တရုတ်တွေကို ငွေပေးနာမည်ခံခိုင်းပြီး အိမ်ခြံမြေတွေ ဖိဝယ် ဈေးတွေ တိုးပေးဝယ်လိုက်ကြတယ်။ နာမည်ခံထားသူ တရုတ်တွေလဲ ၀င်ငွေပိုရ။ မြန်မာတွေကို ဘေးဖယ်ထုတ်ပြီး ကျည်ဆံတချက် မဖေါက်ရဘဲ အဓိက အချက်အချာ ကျတဲ့နေရာတွေကို ဆွေမျိုးဖေါက်ဖေါ် လက်ထဲ အပ်လိုက်ရပါပြီ။ ဘာဖြစ်လာမလဲ။ မြေဈေးတက်လာမယ်။ မြေဈေး/ အိမ်ဈေး-တက်လာရင် အိမ်ငှားခ ကလဲ အတိုးနဲ့ကိုက်အောင် လိုက်တက်မယ်။ အဲဒီတော့ ငွေကြေးဖေါင်းပွမှုနှုန်း မြင့်တက်လာပါမယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာပါမယ်။ ပြည်သူတွေ ပိုကြပ်တည်းလာပါမယ်။
အခုပင် နိုင်ငံခြားပညာရှင်တွေက ၂၀၁၂ မှာ အာရှမှာ ငွေကြေးဖေါင်းပွမှုနှုန်း အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာမယ် ဟောထားကြပြီ။ ငွေဖေါင်းပွတာ အလွန်များရင် အစိုးရအခက်တွေ့မယ်။ လူတွေစားဝတ်နေရေး မလုံလောက်တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်လာပါမယ်။ လာဖို့ရှိနေပါပြီ.. ဒီတခါဖြစ်လာရင် ဘာမှ နိုင်ငံရေးစကားတွေ မအော်ဘဲ ကုန်ဈေးနှုန်းထိန်းပေးပါ။ အလုပ်အကိုင်တွေ ဖန်တီးပေးပါသာ အော်ကြပါ။ ဘာနဲ့အရေးယူမှာလည်း။ အော်ချင်သပဆိုရင် အုပ်ချုပ်သူတွေ အားလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု ကြေငြာတာ လုပ်ရေးထည့်အော်ပါဗျာ။
အဲဒီကျရင် အခုငွေဈေး ခိုင်မာနေပါတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာငွေဈေး ထိုးကျလာပါမယ်။ ငွေဈေးတွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်လာရင် စိးပွားထိုးရပ်သွားပါမယ်။ အဲဒီကျရင် နောက်တခေါက် ငွေမဲတွေ ခ၀ါချတာ လုပ်လာပါအုံးမယ်။ နောက်တခေါက်ထပ်လုပ်ရင် တရုတ်က အခုတခေါက်လို မြေဈေးကို ဈေးကြီးကြီး ပေးနေစရာမလိုဘဲ တနိုင်ငံလုံးနီးပါး ကောင်းပေ့နေရာတွေ ၀ယ်ထားပါတော့မယ်။ ၉၇-မှာ ထိုင်းမှာ ငွေဈေးကျချိန်ကတော့ ထိုင်းလုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေက ဈေးပေါပေါနဲ့ သိမ်းသလို ကျနော် တို့မြေတွေကိုလဲ တရုတ်တွေက ဈေးပေါပေါနဲ့ ထိုးအပ်ကြရပါတော့မယ်။
စစ်တိုက်ပြီး သိမ်းရရင် စစ်ပွဲစားရိတ်ကုန်နေမယ်။ စစ်စားရိတ်က အရမ်းများတယ်။ ကမ္ဘာနဲ့ ပြသနာတက်နေနိုင်တယ်။ အခုလိုပေါချောင်ကောင်း ၀ယ်ရတာ အကိုက်ဆုံးပေါ့။ မြန်မာ့မြေ တွေအိမ်တွေ လက်ထဲရထားပြီးရင် မကြာခင် အိမ်ငှားခတွေ တင်လာပါမယ်။ တင်လာရင် မြန်မာတွေ လူနေမှု စားစရိတ်မကာမိတော့ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှား ကိုပိုပြီး ထွက်လုပ်ကြရပါမယ်။ အိမ်မှာကျန်နေတဲ့ မြန်မာမလေးတွေ တရုတ်မယားငယ်အနေနဲ့ ကောက်စားလိုက်ပါမယ်။
အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်တခုလုံး နီးပါးကို စစ်တိုက်နေစရာမလိုဘဲ လူမျိုးသွေးရောနော နည်းနဲ့သိမ်းဖို့ဆိုတာ ဒိလိုခပ်ညံ့ညံ့ အုပ်ချုပ်သူကို အသက်ဆက် ပေးထားရမယ်လေ။ ကနေ့တရုတ်က ဗိုလ်ရွှေတို့ကို ငွေအများကြီး ချေးပေးတယ်။ အတိုးနှုန်း နည်းနည်းလေးနဲ့။ ပြန်မဆပ်နိုင်လဲရတယ်။ ပူနေစရာမလိုဘူး .. ထပ်တောင် ချေးပါဦးမယ်။ နောင် အနှစ် ၂၀- လောက်ဆို သူတို့လူတွေ (တရုတ်တွေ) မြန်မာအလံအောက်မှာ ဒါဒို့ပြေ ဒါဒို့မြေ ၀ပိုင်တဲ့မြေ ဆိုလို့ ရပါတော့မယ်။
လာမဲ့ ၁၅-နှစ်လောက်ဆို မန္တလေး ရှမ်းပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ် တို့ရဲ့တိုင်းမှုးလုပ်သူဟာ တရုတ်စကားတတ်ရန် လိုတယ်ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ မန္တလေး၊ လားရှိုး၊ မူဆယ်လမ်းတွေမှာ တရုတ်စာတမ်း ထိုးပေးရပါတော့မယ်။ အဲဒီတော့ ၂၀၂၅ ဆိုရင် ပုံသာဖေါ်ထားကြည့်ပေတော့။
ကျနော်စိတ်ထဲ စဉ်းစားမိတာလေးတွေပါ။ တရုတ်မှာက နိုင်ငံရေးကို အမျှော်အမြင်အများကြီး ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေ မြန်မာပြည်ကို အနုနည်းနဲ့ အသာလေးရယူဖို့ဘယ်လို စီမံကိန်းတွေချထားလဲဆိုတာ သိဖို့ ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမဲ့ သိမ်းယူဖို့ကတော့ အပြတ် စီစဉ်နေတာ မလွဲပါဘူး။ သူတို့ ဦးဏှောက်ကို ကျနော်တို့ ဘယ်ယှဉ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ကျနော်တွေးတော သလို မဟုတ်ပါဘူး.. ငြင်းချင်ရင်လဲ ရပါတယ်။ အရိပ်ကတော့ မြင်စပြုနေပါပြီ။ အကောင်ကိုမြင်တတ်ရင် အတတ်ပြောနိုင်ပါပြီ ။
အများကြီးရှိပါတယ်… အဓိက ကျတာလေးပါ။ ကျနော်တို့မသိနိုင် မမြင်နိုင်တာတွေ ရှိပါဦးမယ်။ တရုတ်ပြည်က နိုင်ငံရေးဗျူရိုတွေ မွေးထားတော့ ဘက်ပေါင်းစုံ ဒေါင့်ပေါင်းစုံကနေ အများကြီး စဉ်းစားထားတာ။ ကျနော်တို့လောက်အဆင့်နဲ့က သူတို့မြုပ်ကွက်တွေ နည်းနည်းလေးကိုတောင် သိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
ထားပါ.. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ရသွားမှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မလိုလားဆုံးသော တိုင်းပြည်ကို ပြပါဆိုရင် နံကြားလက်ထောက် စဉ်းစားမနေနဲ့… ဘယ်နိုင်တွေ ရှိနိုင်ဦးမလဲ ခေါင်းအရှုပ်ခံ စဉ်းစားမနေနဲ့။ မြေကြီးလက်ခတ်တာမှ လွဲသွားနိုင်သေးတယ်။ တရုတ်မှ တရုတ် …အသေချာဆုံး။ ဘယ်သူဘာပြောချင်သလဲ။ အဲဒီလောက် တရုတ်က ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီရသွားမှာ မလိုလားတာ သေချာတာမှ သိပ်သေချာ။ ချီးကိုသာမြိုလိုက်ပါဦးမယ်။ ကျနော်တို့ကို ဒီမိုကရေစီ ဘယ်လို မှမရအောင် ဘက်ပေါင်းစုံလုပ်နေမှာပါ။
အဲဒီမှာ ဘာလာဖြစ်သလဲ။ စစ်တပ်ကို ကြမ်းရမ်းပြီး တိုင်းပြည်စုတ်ပြတ်သွားအောင် ကူပြီး ဖျက်ဆီးပေးတော့တယ်။ ပျက်လေ သူတို့ကို အားကိုးရလေ။ ရောဂါရင့်လေ ဆရာကြိုက်လေ။ ရွှေရွှေမျက်ဖြူဆိုက်လေ ယီးစင်းကြိုက်လေ။ အဲဒီလိုကူညီတဲ့အတွက် မမြင်ရတဲ့ကံတရားက ရိုက်တာ ခံရတော့တာပါဘဲ။
ဗိုလ်ချုပ်နှင့်တကွ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ဂါရ၀ ပြုပါတယ်ဗျာ
တင်ပေးတဲ့ ကိုရွှေဘိုသားကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကိုပြောသလိုပါပဲဗျာ မျက်ရတောင်ကျမိပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်စရာ မလိုပါဘူး ကိုအောင်လေးရယ်
ဒါက မြန်မာလူမျိုးတိုင်း နားထောင်သင်.လို. ကျွန်တော်လည်း တင်ပေးတာပါ
ညဘက်ကျရင်7ပုဒ်ထပ်တင်အုံးမှာ အခုတော. လိုင်းသိပ်မကောင်းလို.မတင်တာ
ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုသီဆို ထားတဲ.သီချင်းလေးတွေ နားထောင်ပြီး
ကိုေ၇ွှဘိုသား ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားက ကျွန်တော်ရင်ကို တော်တော်ထိတယ်ဗျာ
ဘာပြောသွားတာလည်း လုပ်အုံးလေ မျှဝေပါအုံး
ကျုပ်တို့လူမျိုးက သူတစ်ပါး သိပ်အားကိုးသလား မသိ..
ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းနည်းသလား မသိ..
သူတစ်ပါးအပေါ်မှီခိုချင်တဲ့ စိတ်များသလား မသိ…
ခေါင်းဆောင်ကောင်းရင်.. တိုင်းပြည် ကောင်းနေခဲ့ပြီး..
ခေါင်းဆောင်ညံ့ရင်.. တိုင်းပြည် ညံ့နေခဲ့သလိုပါပဲ..
ဗုဒ္ဓရဲ့ ဆုံးမစကားကို နားမထောင်ဘူး…
တစ်ကယ် ချစ်တယ်..လေးစားတယ်.. ဆိုရင်.. သူ ရှိသည် ဖြစ်စေ.. မရှိတော့သည်ဖြစ်စေ…
သူ့စကားကို အလေးထားရမယ်.. လေးစားရမယ်.. လိုက်နာရမယ်..
ီုဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေ ဆုံးမခဲ့သလဲ… သိတန်သလောက် သိကြတာပဲ..
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို အားလုံးသိနေသားပဲ.. အားလုံး လေးစားနေသားပဲ..
ဒါပေမယ့်…. ဗိုလ်ချုပ်လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ ဘယ်လောက်များ စိတ်ကူးဖူးလဲ..
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လေးစားတယ်.. ချစ်တယ်..ပြော.ပြောပြီး…
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ နှလုံးသားကို လှမ်းလှမ်းကြည့်ပြီး…
မိမိနှလုံးသားကို ပြုပြင်ဖို့ မေ့နေသူတွေ အများသား…
ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ တိုင်းတပါး အုပ်ချုပ်မှုက လွတ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီ….
သူ အနား ယူသွားခဲ့ပြီ…
ဗိုလ်ချုပ်ရှိနေရင် အကောင်းသား..ဆိုတာ…တမ်းတလို့ပဲ ရနိုင်တော့မယ်…
မှန်းဆလို့ရနိုင်တာက…… ငါတို့…… ဘာလုပ်ကြမလဲ…..
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ…. ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်များအား….
ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကျေးဇူးရှင်.. ဗိုလ်ချုပ်တို့ ဖခင်..
ကောင်းစေချင်တဲ့ မှာစကား.. ငါတို့ မမေ့အား….
အိုအသင်တရုတ်ကြီး သင့်ကိုငါမကြောက် သင်ကသာငါ့ကို ကြောက်ရမည်၊ အဘယ်ကြောင့်မူကား…. ဘာဆက်ရေးရမှန်း မသိတော့ဘူး ဆက်ပေးကြပါအုံး….
အခု ဥပဒေအကြံပေးက ကြာကူလီ ကြီးဆိုတော.
အရုတ်ကြီးရဲ. မိန်းမကို ကြာကူ မှာမို.လေဗျာ
ဒီကောင်.ကို ဒီအလုပ်ခိုင်းဖို. ခန်.ထားတာဗျ